डोलि चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामा मा सेतो कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस पापी दैब:माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ! – 24updatemedia
डोलि चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामा मा सेतो कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस पापी दैब:माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं !
पापी दैबले दिदीलाई खोसेर लग्यो कति सपनाहरू थिएहोला कति रहरहरु थिए होला पुरा हुन नदि खोसेर लगीस फूपू र पुसाइ लाई रातो डोलि चडाएर बिदाइ गर्ने ठाँउ मा सेतो कात्रो अोडाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस दैब तेरो लिला पनि कस्तो अचम्म छ । दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं हजुर को आत्माले शान्ति पाओस स्वोर्गमा बाँस होस plz didi come back always miss u didi । – आफ्नी दिदि श्रीषा रावलको निधन पस्चात बहिनी खुसी विष्ट ले लेखेको यो हृदयस्पर्शी फेसबुक स्टाटस ।
यो पनि:काठमाण्डौँ । सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिन थालिएको छ । बिहीबार सरकारी निकायका दुई व्यापारिक संस्थानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
Previous ८४ वर्षीय वृद्ध पक्राउ, ७ वर्ष बढी जेल सजाय
Next निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बन्ने भयो नेपालको पहिलो यानसेतु